OMC दबाव पेट्रोल इन्धन ट्यांक | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
OMC दबाव पेट्रोल इन्धन ट्यांक
EBay को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् इनिन्रude/ जॉनसन दोहोरो ईन्धन लाइन र ट्यांक
पुरानो OMC मोटर्स प्रयोग गरिएको चेतावनी दबाव पेट्रोल इन्धन ट्यांक बारे
यी मोटर्सले क्रुज ई-टोन ट्याङ्कको रूपमा चिनिने ईन्टरनेट ईन ट्यांक प्रयोग गर्दछ। टैंकबाट ईंन्धन चिसो गर्नुको सट्टा, दोहोर्याइएको लाइनले टैंकमा हावा पम्प गर्छ, यसलाई 4-7 PSI लाई थिचाइन्छ जसले मोटरलाई फर्काउँछ। मूलतया, यी दबावित टैंक एक अत्यन्त खतरनाक आगो वा विस्फोट खतरा हो। ओएनसीले अन्तमा 1959 पछि यी ट्याङ्कहरू प्रयोग गर्न बन्द गर्यो ..
तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ यदि तपाइँसँग यी ट्याङ्कहरू छन् किनभने नली दुई लाइनहरू, एक ईन्धनको टैंकमा हावा पम्प गर्न र अन्य मोटरमा ईन्धन दिनका लागि पाउनेछन्। यो प्रकारको टैंक पहिलो बाह्य ईन्धन ट्यांक थियो जुन ओएमसी सँग बाहिर आईपुग्थ्यो र यसको दिनको नयाँ प्रविधि थियो। एक पटक समस्याको पहिचान भएपछि, नाका मोटर निर्माताहरूले एकल लाइन ईन्धन सुषण प्रणालीमा स्विच गरे जुन धेरै सुरक्षित छ।
दबाव ट्यांक कनेक्टर
पुरानो शैली दबाव इन्धन ट्यांक
5 Gallon दबाव इन्धन ट्यांक
दबाव इन्धन ट्यांक समस्या:
पेट्रोल र ग्याँस वाष्प दबाब एक बम भन्दा कम केही छ!
यी टैंकहरू ठीकसँग सील गर्न कठिन छ, नयाँ हुँदा पनि। यदि ट्यांक लीक भने, ग्यास र तेल तपाईंको डुङ्गा र हावामा भाग्न सक्नेछ।
टपका ट्यांक पनि इन्धन अप लामो नली फिर्ता मोटर गर्न छुटकारा आवश्यक दबाब गुमाउन।
यदि तपाईंसँग एक रन सिलिन्डर छ भने, यी मोटर्सहरूले स्नोज गर्न सक्दछ (ब्लकभित्र आगो लगाउँछन्) र ईंन्धन रेखा र ट्यांकमा दबाब दियो। यो टोपीलाई धन्यवाद उजागर गर्न र 20 फुट हावामा गोली मार गर्न को लागी ज्ञात गरिएको छ! यो छींकिंगले तपाईंको ईंन्धन टैंकलाई पनि पराजित गर्न सक्छ। यो पनि ईन्धन लाइनहरु को टूटना गर्न को लागि जानिन्छ।
तपाईं पानी बाहिर छन् र आफ्नो ट्यांक दबाव पकड असफल भएमा, तपाईँको मोटर चलाउन मात्र तरिका कार्बोरेटर को स्तर माथि ट्यांक पकड र गरौं मोटर गर्न इन्धन गुरुत्वाकर्षण फिड छ।
यी ट्यांकहरू सञ्चालन गर्न सरल थिएनन्। तपाईंले आफ्नो मोटर सुरू गर्न सक्नु अघि ट्यान हातपट्टीसँग ट्यांक थिचाउनु पर्छ। टोप लिनुभन्दा पहिले ट्यांकलाई ड्रेस अप गर्नु पर्छ।
यदि तपाइँसँग यी पुरानो दबाब टैंक छ भने, संभावनाहरूले राम्रो काम गर्नको लागि केही मर्मतको आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ ट्यांकहरू र छापहरू ट्याङ्क गर्न यी कि ट्याङ्कमा उपलब्ध छन् जुन अहिले पनि खरीद गर्न सकिन्छ। तपाईं निर्णय गर्न को लागी वा तपाईंको मौजूदा टैंक को मरम्मत या ईंन्धन पंप को प्रकार को रूप मा बदलन को आवश्यकता को रूप मा बनाउन को लागी ओएमसी आज को उपयोग गर्दछ।
निम्न प्रक्रिया तपाईं अझ पारंपरिक इन्धन पम्प, रेखा, र ट्यांक आफ्नो मोटर सुरक्षित र थप विश्वसनीय हुन सक्छ कसरी जो हुनेछ बताउँछ।
एकल रेखा इन्धन पम्प चूषण ट्यांक प्रणालीमा दुई लाइन दबाव ट्यांक प्रणाली बाट रूपान्तर
यो रूपान्तरण गर्नको लागि प्रक्रिया धेरै सरल छ, खास गरी यदि तपाईसँग पहिले नै तपाईको कार्बोरेटरले धुनको लागि हटाइयो। तपाईलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीमा निम्न समावेश छ:
निर्वात लाइन नली को बारेमा6खुट्टा, कुनै पनि स्वतः भागहरु स्टोरमा उपलब्ध छैन।
Mikumi एकल कार्बोरेटर पम्प
वैक्यूम रेखा ढक्कन
3 वा4जिप सम्बन्ध
एकल रेखा इन्धन कनेक्टर
एकल रेखा ग्याँस ट्यांक र नली
Mikumi एक जापानी कम्पनी हो जुन वर्ष को लागी कारवाइटर र ईंन्धन पंपहरु भएको छ। तपाईले तिनीहरूको ईन्धन पंपहरूमा जाने-कार्टहरू, अल्ट्रा-प्रकाश विमान, र सानो इन्जिनहरूमा धेरै अन्य अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो ईन्धन पंप केवल कुनै पनि गाडीको पसलमा फेला पार्न सकिन्छ। मैले यो एक अनलाईन $ 22.00 को लागि किन्यो। धेरै इइन्रूड र जॉनसन मोटर्सका लागि धेरै ईन्धन पंपहरू सीरेक्रेजमा माउन्ट गर्छन्। यस 5.5 HP मोटरको स्थितिमा, ईन्धन पंप माउन्ट गर्न कुनै स्थान छैन। 7.5, 10, वा 18 HP को रूपमा ठूलो मोटर्सले ओएससी ईएमसी ईन्टरनेट पम्प थप गरेको छ।
Mikumi पल्स सक्रिय इन्धन पम्प
यो ईन्धन पंप वैक्यूम पल्स द्वारा संचालित छ कि यो मोटर बाट हुन्छ। यो वैक्यूम मोटर द्वारा उत्पन्न हुन्छ र पंपमा केन्द्र जडानकर्तासँग जोडिएको नलीको माध्यमबाट पंपलाई डेलिभर गरिन्छ। अन्य दुई कनेक्टरहरू ग्याँस ट्यांक वा ईंन्धन जडानकर्ता (तीर इशारा गर्दै) मा जानुहुन्छ र कार्बोरेटर (तीर बिन्दु बाहिर) लाई जाने लाइनमा छन्।
कार्बोरेटर हटाउनुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। को कार्बोरेटर हटाउने निर्देशन हेर्न।
यदि तपाइँ कार्बोरेटर पछि स्थित इन्टेक डाइफल्ड आवरण हटाउनुहुन्छ भने, तपाईं माथि रबड फलापको साथ दुई छेद देख्नुहुनेछ। फापहरू चेक वाल्वहरू जुन क्र्रेनकसबाट बाहिर यात्रा गर्न हावामा छन्। यसले ट्यांक थिचाउन दुईवटा ईन्धन लाइनको लाइनमा यात्रा गर्न सकारात्मक वायुमण्डल सिर्जना गर्दछ। वसन्त लगायत दुई पछाडि हटाउनुहोस् र वाल्व जाँच गर्नुहोस्। यी छेद मध्ये एक हाम्रो दुई चक्र मोटरमा प्रत्येक क्रेनकस चैम्बरमा जान्छ।
पल्स वैक्यूम प्राप्त गर्न, एक वैक्यूम लाइन प्लग को नोक संग एक छेद प्लग गर्नुहोस्। भ्वाइस्यूम लाइन प्लगको लम्बाई छाँट गर्नुहोस् ताकि किन्क डाइल्डफोल्ड आवरण प्लगमा राख्नेछ ताकि यो स्थितिबाट बाहिर जान सक्दैन। सेन्क प्यानलिभ आवरण बदल्नुहोस्।
पुरानो दोहोरो ईन्धन लाइन कनेक्टरलाई नयाँ एकल लाइन ईन्टरनेट जडानको साथ बदल्नुहोस्। म लगभग $ 6.00 को लागी एक एकल लाइन ईंन्धन कनेक्टर को प्राप्त गर्न मा सक्षम थिए तर ओमसी पार्ट्स डीलरों देखि पनि उपलब्ध छ। तल चित्रित तपाईं पुरानो र नयाँ ईन्टर जडानकर्ता हेर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कनेक्टर (बाँयामा) मात्र दुई प्रवाजहरू छन्। सेन्टिम रेखाको2फिट संलग्नक मापन तहमा कनेक्टरमा संलग्न गर्नुहोस्।
ईन्डर लाइन कनेक्टर सम्म पुग्ने दुइटा पुरानो लाइनहरू हटाउनुहोस् र एकल लाइनसँग बदल्नुहोस् जुन ईन्धनको कनेक्टरबाट नयाँ ईन्धनको पम्पमा जान सकिन्छ।2फिटको पङ्क्तिमा ईंधनको पम्पमा बाटोको अनुमति दिनुहोस्।
कार्बोरेटर बदल्नुहोस् यहाँ क्लिक। कार्बोरेटर स्थापना गर्न निर्देशनहरू हेर्न।2फुटको भ्याक्स्युम रेखा संलग्न गर्नुहोस् कार्बोरटरमा ईन्धनको पम्पमा घुमाउन।
आफ्नो वैक्यूम पल्स लाइन, कार्बोरेटर लाइन, र ईंन्धन कनेक्टर लाइन को वरिपरि ईंन्धन पंप मा रूट गर्नुहोस् जुन म क्रान्ककेस को बगल मा सुन लेफ्ट लीवर को पछि राख्छ। कुनै पनि अतिरिक्त लम्बाइ रेखाहरू फारम गर्नुहोस् र ईन्धन पम्पमा जडान गर्नुहोस्। यी रेखाहरू घुमाउँदा, तिनीहरू कुनै पनि हिँड्ने भागहरू, वा लिङ्कहरू राख्नुहोस्। सहकर्मीले तपाईंको नयाँ ईन्धन पम्पमा फिट गर्नु पर्छ। लाइनहरू सुरक्षित गर्न जिप सम्बन्धहरू प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू बस्न सक्नेछन्।
तपाईंको मोटर अब परिवर्तित छ र आफ्नो नयाँ ग्याँस ट्यांक र इन्धन लाइन प्रयोग गर्न तयार छन्।